Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း) - Hello Sayarwon
Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း)
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 04/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း) ကဘာလဲ။
ဘယ်သူမဆို ပြင်ပအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို မှားမျိုချမိတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါ အစာလမ်းကြောင်းက ပစ္စည်းပေါ်သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်ကနေအလိုလျောက် ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ အချို့ ကိစ္စတွေမှာတော့ တစ်နေတတ်တာ လမ်းတစ်လျောက်မှာ ဒဏ်ရာဖြစ်စေတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲစိတ်ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ်။
Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အဖြစ်များပြီး အသက်မရွေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ နို့စို့အရွယ်တွေဟာ စပ်စုလိုပြီး တွေ့သမျှပါးစပ်ထဲထည့်တတ်တဲ့ အကျင့် ရှိတာကြောင့် ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပိုသိလိုပါက သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
– ချောင်းဆိုး ခြင်း
တကယ်လို့ ကလေးတစ်ယောက် က ပြင်ပအရာမျိုချမိလို့ လည်ပင်းမှာ မနင်ဘူးဆိုရင် လက္ခဏာချက်ချင်း ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ပစ္စည်းက အစာလမ်းကြောင်းမှာရှိနေပြီး သဘာဝအတိုင်း ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် လက္ခဏာတွေ နောက်မှပြလာပါလိမ့်မယ်။ အစာလမ်းကြောင်းနဲ့အူလမ်းကြောင်းမှာပိတ်နေရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ symptom တွေကတော့ :
ဒီလို ဆို့နေတာကို ကုသမှုမရှိပါက နမိုးနီးယား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း, ချောင်းဆိုး သလိပ်ထွက်ခြင်း , နှာချေခြင်း စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာအဖျားလည်း တွဲပါလာတတ်ပါတယ်။
အစာမဟုတ်တဲ့ အရာမျိုချမိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။
အကယ်၍ဘာလက္ခဏာမှ မပြပဲဆရာဝန်ကလည်း လုနာအခြေအနေကို ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် နောက်မှအချိန်မှန်ပြသနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ လက္ခဏာပြနေပြီး မျိုချမိတဲ့ အရာကို ဆရာဝန်ကစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း ခွဲခန်းဝင်ရပါမယ်။
တကယ်လို့ လက္ခဏာတွေကဆက်ပြနေပြီး မသက်သာဘူးဆိုရင် မျိုချမိတာနဲ့ ချက်ချင်း ဆေးရုံသွားပါ။
တကယ်လို့ မျိုးတူပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ပိတ်နိုင်ချေကို ခွဲခြား လို့ရအောင် ယူသွားပါ။
တကယ်လို့ သင့်ကလေးမှာ အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုတွေ့လာပြီဆိုရင် , မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ လူတိုင်းရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်တွေက လုပ်ဆောငိမှုမတူကြတဲ့အတွက် သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရွေးချယ်ပါ။
သံလိုက်ဓါတ်ပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေမျိုချမိတာက အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကလေး မျိုးချမိတယ်ဆိုရင် ကုသမှုခံယူပါ။
Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘယ်အချက်တွေက ဒီလိုမတော်တဆမှုကို ဖြစ်စေသလဲ?
ကလေးတွေနဲ့ နို့စို့အရွယ်တွေဟာ စပ်စုလိုပြီး တွေ့သမျှပါးစပ်ထဲထည့်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဒီအရွယ်တွေဟာ မြေပဲနဲ့ ဟော့ဒေါ့လို အစာတွေကို ကြေအောင်မစားနိုင်သေးပါဘူး။ ကလေးကြီးတွေကတော့ စိတ်အခြေအနေရ အာရုံစိုက်မှုခံချင်တဲ့အတွကိ အစာမဟုတ်တဲ့ အရာတွေကို မျိုတတ်ကြပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေက အစာပြွန်ကို ကျဉ်းစေပြီး အစာကို နင်စေပါတယ်။
Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘယ်အရာတွေက ဒီလိုမတော်တဆမှုကို မြင့်စေသလဲ?
ကလေးတွေနဲ့ နို့စို့အရွယ်တွေဟာ လျောက်သွားပြီး တွေ့သမျှပါးစပ်ထဲထည့်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမတော်တဆဖြစ်သူကို ကြည့်ရင်အများစုက ၃ နှစ်အောက်ကလေးတွေပါ။ တကယ်လို့ ဘယ်သူမှမထိန်းဘူးဆိုရင် ကလေးတွေ မျိုချနိင်ချေက ပိုမြင့်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုအရာတွေ :
ကလေးပါးစပ်နဲ့ ဆန့်တဲ့အရာမှန်သမျှ ဟာ အနီးအနားမှာရှိနေရင် ကလေးကို စောင့်ကြည့်သူမရှိတာနဲ့ မျိုချမိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကလေးကစားမယ့်နေရာသီးသန့်မှာ ဒီပစ္စည်းတွေမထားဖို့ သတိပြုပါ။
Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဖြစ်ပုံကိုသေချာမေးပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအရာကို မျိုချမိတု ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာ ပြီးတော့လက်ရှိ ခံစားနေရတာကိုပါ မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေကတော့ ပါးစပ် လည်ချောင်းနဲ့ အဆုတ်ကို အဓိကထား ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါ စမ်းသပ်မှုတွေထဲက တစ်ခုဒါမှမဟုတ် တစ်ခုထပ်ပိုပြီး လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
– လည်ပင်း ရင်ဘတ်နဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကို X -ray ရိုက်ပြီး အကြွေစေ့ ဘက်ထရီ အရိုးလို အရာတွေ ဘယ်မှာရှိနေနိုင်သလဲ ဆိုတာ ရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ပံမှန် X -Ray နဲ့ မမြင်ရရင် barium သုံးပြီး X Ray ရိုက်တဲ့နည်းကို သုံးပါလိမ့်မယ်။
– ဆရာဝန်က အသံအိုးနေရာကို special fiber
optic light ကိုသုံးပြီးတိုက်ရိုက်ကြည့်တာ ဒါမှမဟုတ် dental မှန်ကိုသုံးပြီး indirect ကြည့်တာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကလည်း ပူးပေါင်းတတ်တဲ့လူနာလိုအပ်ပါတယ်။
Fiber optic scope (endoscopy) နဲ့လည်ချောင်းကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းက short procedure unit ဒါမှမဟုတ် operating room ထဲမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မတော်တဆမျိုချမိတဲ့ ပြသနာကို ဘယ်လိုကုသနိုင်သလဲ?
တကယ်လို အသက်ရှူ ကြပ်တာ နင်တာဖြစ်နေပြီဆိုရင် အရေးပေါ်ကုသနည်းတွေ လိုအပ်ပါပြီ။ တကယ်လို့ စကားမပြောနိုင်အသံမထွက်နိုင်အောင် နင်နေတယ်ဆိုရင် ဝမ်းဗိုက်ကို ဖိနိပ်တာမျိုးရှောင်ပါ။ အရင်ဆုံး လူနာကို လည်ချောင်းရှင်းအောင်စောင့်ကြည့်ပါ။ လေပြွန်ရှင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်မှာတင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကလေးဒါမှမဟုတ် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကို စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
Swallowed object (ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မှာ အစာရေမျိုပြွန်ကို ထိခိုက်မှု အသေးစားဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ယူဆပြီး လူနာကို တစ်ခုခုသောက်တာ စားတာလုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ အခက်အခဲ နဲ့ နာကျင်မှုတွေမရှိပဲ မျိုချနိုင်တယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်အခြေအနေတွေလုပ်ဖို့ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
တကယ်လို့ ပစ္စည်းက လည်ပင်းနောက်ပိုင်းမှာ ကြည့်ရုံနဲ့ မြင်နေရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ဖယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိဖို့အတွက် ထုံဆေးပေးထားပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်က ခွဲခန်းသုံးညှပ်နဲ့ ဆွဲထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ နင်နေတဲ့ပစ္စည်းက အသံအိုးနားမှာဆိုရင် ချက်ချင်း ဖယ်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်တာကိုတော့ အရေးပေါ်ခန်းမှာမလုပ်ဆောင်ပါဘူး။ နား နှာခေါင်း လညိချောင်းအထူးကုတွေက short procedure unit ဒါမှမဟုတ် operation room လောက်မှာပဲလုပ်ဆောင်ပါတယ်။
အစာအပါအဝင်အခြားအရာတွေက လည်ပင်းထဲမှာတစ်နေတာဆိုရင် ဖယ်ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟာကို တော့ အူလမ်းကြောင်းအထူးကုတွေက fiber optic scope သုံးပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါမယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အစာပြွန်အထက်ပိုင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ အရာတွေကို ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ပြွန်( catheter) ကို ထိုအရာဝတ္တုအောက်ထိသွင်းပြီး ပူဖောင်းကို လေသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ထိုအခါ တစ်နေတဲ့အခါက ပါးစပ်ကနေ ဆွဲထုတ်လို့ရသွားပါတယ်။
အစာအပါအဝင်အခြားအရာတွေက လည်ပင်းထဲမှာတစ်နေတာဆိုရင် တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးပေးပြီးကုကြပါတယ်။
Nitroglycerine ကိုလျှာအောက်မှာပေးတာ glucagon ကို အကြောဆေးသွင်းတာတွေက အစာပြွန်ကို ပြေလျော့စေပြီး ပစ္စည်းကို အစာအိမ်ထဲရောက်သွားစေပါတယ်။ ဒီအတွက် IV catheter လိုပြီး အောင်မြင်နိုင်ချေက နည်းပါးပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲရောက်သွားရင်တော့ အစာဟောင်းတွေနဲ့အတူပါသွားပါလိမ့်မယ်။
ဘက်ထရီလိုအရာနဲ့ အခြားချွန်ထက်တဲ့ အပ်တွေအရိုးတွေလိုမျိုးအရာတွေဆိုရင်ပိုသတိပြုဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
သူတို့တွေက လွယ်လွယ်စွန့်ထုတ်လို့ရနိင်ပေမယ့် အူလမ်းကြောင်း တစ်နေရာမှ ညပ်နေတတ်ပါတယ်။
ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိမှုအတွက် ခွဲစိတ်နည်း
အချိန်တော်တော်ကြာ တစ်နေတဲ့ အရာတွေဟာ အစာပြွန် တိုက်စားမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ လူနာကိုလည်း အဖျားတက်စေနိုင်ပါတယ်။ တိုက်စားမှုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ထပ်ပြီး တိုက်စားမှုတွေ ပိုးဝင်တာတွေမဖြစ်အောင် အဲ့အရာကိုအမြန်ဖယ်ရှားပြီး လိုအပ်တဲ့ ထိခိုက်မှုတွေကို ပြန်ကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲများ
ဆရာဝန်တွေနဲ့ အထူးကုတွေနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ပြသနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ထဲရောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကို အပြင်ထွက်သွားပြီဆိုတာ သေချာစေဖို့အတွက် X ray နဲ့ ပုံမှန်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ မျိုချမိတဲ့ ပစ္စည်းကိုထုတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ အစာရေမျိုပြွန်ကို သေချာစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြွန်ရဲ့ အနေအထားပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သေချာအောင်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲ စစ်ဆေးမှုတွေကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့်လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေက ဖြစ်နေကျမို့လို့ပါပဲ။
ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိခြင်းနဲ့ သင့်တော်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက ဘာတွေလဲ?
အောက်ပါ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက ပြင်ပပစ္စည်း မတော်တဆမျိုချမိတဲ့ပြသနာ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
– အကြွေစေ့တွေ , အရုပ်အစိတ်အပိုင်းတွေ, ဘက်ထရီတွေကို ကလေးတွေလက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာထားပါ။
– အစားအစာတွေကို ကလေးနဲ့လူငယ်တွေစားဖို့ သင့်တော်တဲ့ အပိုင်းကလေးတွေအဖြစ်ဖြတ်တောက်ပါ။
– တကယ်လို့ ကလေးတွေမှာ အဖတ် , အရည်နဲ့ စားစရာတွေကို မျိုချဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ သင့်တော်တဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Swallowed Object https://
page4_em.htm Accessed October 27, 2017
Swallowed (or Inhaled) Foreign Object https://
or-swallowed#overview1 Accessed October 27, 2017